Imi na-agba ọsọ n'ezie na-agbapụta mmiri ụbụrụ: Nwoke Arizona Joe Nagy tụfuru otu teaspon nke ụbụrụ ya - Ụwa 2022
Imi na-agba ọsọ n'ezie na-agbapụta mmiri ụbụrụ: Nwoke Arizona Joe Nagy tụfuru otu teaspon nke ụbụrụ ya
Mgbe imi na-agba n'akwụsịghị akwụsị n'afọ niile, onye bi na Arizona Joe Nagy tụrụ ụjọ ịchọpụta na mmiri na-agba mgbe niile bụ n'ezie ụbụrụ ya na-agbapụta.
Ọmụmụ ihe gara aga enyochala mpụta mmiri nke cerebrospinal na-apụta na mberede yana njikọ ha na hypotension intracranial na isi ọwụwa. Ọ bụ ezie na a maghị kpọmkwem ihe kpatara ọnọdụ ahụ, mgbaàmà nwere ike ịgụnye ọgbụgbọ na ọgbụgbọ, mgbu n'olu ma ọ bụ azụ, ọhụụ na-adịghị mma ma ọ bụ anya, na dizziness.
Nagy gwara Fox 10 na ọ ghọtara na e nwere nnukwu nsogbu karịa allergies mgbe ọ gara n'elu akwa otu ụtụtụ na ntanye na-enweghị isi agaghị akwụsị.
"Brooop! Mmiri a doro anya na-esi n'imi na-asọpụta dị ka anya mmiri si n'anya gị pụta. Agara m gịnị bụ ihe a?" ọ gwara Fox 10.
"Egwu na-atụ m ọnwụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata eziokwu."
Usoro ndị kwesịrị ekwesị iji belata mgbaàmà nrịanrịa emeghị ihe ọ bụla iji belata imi ya na-agba mgbe niile na ọnọdụ ahụ ka dịgidere.
"Otu oge ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu. Mgbe ahụ mara mma n'oge na-adịghị anya ọ bụ oge niile, "ka ọ gbakwụnyere.
"Erutere m ebe m na-enwe anụ ahụ mgbe niile. N'ime akpa m jupụtara na anụ ahụ na-agbakọta ha niile."
Otu ọkachamara n'ihe gbasara akwara ozi nyere akụkọ na-agbawa obi na otu akpụkpọ anụ gbara ụbụrụ Nagy gburugburu gbawara na-eme ka ụbụrụ na-agbapụta mmiri.
N'ụzọ dị mwute, ka akwadoro Nagy ịwa ahụ ụbụrụ iji mezie ụbụrụ ya na-agbapụta, nnukwu ntiwapụ nke maningitis gbochiri usoro ahụ. Mgbe ọrịa ahụ mechara kpochapụ, ọ dị njikere ọzọ maka ịwa ahụ.
Neurosurgeon Peter Nakaji kọwara Fox 10 isi ihe ndị bụ isi nke ọrụ ahụ: "Ọ dịghị mgbe anyị ga-ebipụ n'ime ụbụrụ. Anyị na-enweta agịga n'ime oghere iji lelee ya, wee tinye ntakịrị gluu. bụ obere cartilage sitere na imi nke anyị nwere ike ịrụzi n'elu ya ma ahụ ga-ekpuchi ya."
N'ihi usoro na-aga nke ọma, Nagy ugbu a enweghị mmiri na-adị njikere ịlaghachi n'ihe omume kwa ụbọchị n'atụghị egwu imi na-agba.